Izivumelwano zeHong Kong neChina zinobungozi emnothweni – Bayede News
Izivumelwano zeHong Kong neChina zinobungozi emnothweni
Ngenkathi ngibuka labo abakhonondayo kuleli lizwe
by Bayede News Posted on 11 October 2019 17 October 2019
Ngenkathi ngibuka labo abakhonondayo kuleli lizwe laseHong Kong umcabango engibe nawo ngothi, izithelo zemithi etshalwa namuhla ziyodliwa yizizukulwane eziyophila eminyakeni eminingi ezayo.
Umbuzo ongifikele ngothi, kazi iNingizimu Afrika ekhululekile yakhelwe phezu kwaziphi izivumelwano ezashicilelwa ukuvikela amalungelo abathile nokuvulela labo ababecindezelwe amathuba. Sekuphele iminyaka engaphezu kwamashumi amabili aboHlanga belokhu bepaquza bekhuluma ngenkululeko egcina ibe njengotalagu ogcina ngokulubuka kodwa ungalufici.
Kunezinto okuthi uma kukhulunywa ngazo, ikakhulukazi ezilungisa isimo somnotho nezindaba zamabhizinisi aboHlanga kuthiwe uMthethosisekelo wezwe awukuvumeli lokho. Kuyaye kukhulunywe ngezinhlobo ezithile zemikhiqizo noma imisebenzi yamabhizinisi ezobekwa eceleni ukuba isetshenzwe ngosomabhizinisi boHlanga.
Kuyaye kuthi uma kukhulunywa ngodaba olunjalo uzwe kunokuvungama okuthinta ukuphambana noMthethosisekelo uma kucatshangelwa aboHlanga. Sekuphele iminyaka imunyungwa le ndaba kodwa ayifinyeleli esiphethweni. Kanti kwakuvunyelwene ngokuthi aboHlanga bayogcina beyixosha ngemuva impumelelo yomnotho kuze kubuye iNkosi yaMakhosi yini?
Intsha yaseHong Kong igcwele imigwaqo namadolobha ikhala, ikakhulukazi ngezinye zezinqumo ezenziwa ngaphambi konyaka we- 1997. Esinye sezinqumo sithi kusukela ngowe-1997 kuya kowezi-2047 izwe iHong Kong liyokube lizilungiselela ukuhlangana neChina. Phela leli lizwe lalingangaphansi kombuso wamaNgisi.
Isivumelwano esenziwa sithi kusukela emva konyaka wezi-2047 liyokube selingaphansi kombuso waseShayina.
Eminyakeni ye-1980 umholi wezwe lamaShayina uDeng Xiaoping wenza uhlelo lwaba kuMthethosisekelo olubizwa nge-One Country Two Systems lokuthi iShayina izokuba yizwe elilodwa elinenqubo embili. Lokhu kwakuchaza ukuthi Izwe iHong Kong lizozimela ngokomnotho nangokunye.
Ngenkathi kwenziwa lezi zivumelwano kwakukuhle, futhi kwakumele kuphunywe nesivumelwano esizokwanelisa izinkulumo zangaleso sikhathi. Iningi lalabo abaphethe umbuso babesebancane ngaleso sikhathi. Labo, abasemaNyuvesi namuhla bababeseyizingane ezikhasayo.
Ngokuhamba kweminyaka kungena abaholi abehlukene kuyacaca ukuthi kunamaphuzu ahunyushwa ngendlela ethile engesiyo leyo abanye ababecabanga ukuthi yiyo kulo mbhalo. Uma sibheka, uyasondela unyaka wezi-2047 lapho kumele kujike izinto. Uma bebheka isimo izwe elikuso belalela izinkulumo ezikhuluma ngekusasa lezwe labo kuyabonakala ukuthi ikusasa alaziwa. Abanamabhizinisi abayazi inqubo ezolandelwa. Izitshudeni ezisemaYunivesithi zixakwe yikusasa elingachazwa ngendlela egculisayo. Kuyangabazisa ukuthi luyokuba khona uzinzo ezweni.
Phela kuyenzeka umbhalo ube muhle kodwa kuthi uma sewuhunyushwa ngabaholi kucace ukuthi uvumela izimo ezehlukile kulezo abanye abebezicabanga.
Uma sifanekisa ngeNingizimu Afrika kumele sikubuke ngeso lokuthi isimo esasingaphansi kwaso ngesikhathi seCODESA sasinganethezekile njengesimo esikuso namuhla. Kunemibuzo engathi uma ibuzwa yintsha yanamuhla kubonakale sengathi abavuma ngalesiya sikhathi abacabanganga ngokwanele.
Labo abasuke bephethe izintambo zombuso ngenkathi kuxoxiswana basuke benolwazi olubanzi ngezikhonkwane ezimise umnotho. Bayakwazi ukufaka imbambezela kwamanye amaphuzu, okuyokuthi uma seniwabuka kahle ngenkathi seniphethe izintambo nibone ukuthi kwakukhona ukushaywa ngemfe iphindiwe ngenkathi kudlulwa kwamanye amaphuzu anobucayi.
Kuyohlala kusemqoka ukuthi kuzo zonke izinqumo esizithathayo siqikekele ukuthi ulwazi esinalo lubanzi futhi lujulile. Kumele sizibhekisise ezinye zezinqumo ezinikwa isikhathi eside ukuthi zisuke zinika lowo obesemandleni ithuba lokushanela athathe konke angase akuthathe okunomsoco. Imvamisa yezinqumo ezinikwa isikhathi eside kusuke kwaziwa ukuthi iningi labayokube bephila kuleso sikhathi bayokube bengasayicabangi ingcindezi ezathathwa phansi kwayo.
Abaholi baseHong Kong banamuhla bazithola kufanele babheke ikusasa lezwe besebenzisa imigomo okwavunyelwana ngayo eminyakeni eminingi eyadlula. Kugcina sekungena namanye amazwe angalufuni uzinzo kwelamaShayina.
Posted in Ezisematheni